"नाइलन को सारी" युट्युबमा एक करोड भन्दा बढी पटक हेरियो .... – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainment“नाइलन को सारी” युट्युबमा एक करोड भन्दा बढी पटक हेरियो ….
“नाइलन को सारी” युट्युबमा एक करोड भन्दा बढी पटक हेरियो ….
September 19, 2017 Keshab Khadka Entertainment, Kollywood 0
दिपाश्री निरौलाको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र ‘छक्का पन्जा २’ को बिबादित गीत “नाइलन को सारी” युट्युब मा १ करोड भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । ‘छक्का पन्जा २’ यो बर्षको निकै नै प्रतिक्षित चलचित्र मध्य एक हो ।
यस चलचित्रको अर्को गीत पनि निकै हिट छ र ट्रेलर पनि ट्रेन्डिङ नम्बर एक मा पुग्न सफल भएको थियो । गीत र ट्रेलर जस्तै चलचित्रले पनि सफलता पाउछ पाउदैन यो थाहा पाउन असोज ११ प्रतिक्षा गर्नुको बिकल्प छैन । चलचित्रमा दिपकराज गिरि, प्रियंका कार्की, बर्षा राउत, स्वस्तिमा खड्का, जितु नेपाल, केदार घिमिरे, बुद्धि तामाङ लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ।
‘किन किन त्यसै त्यसै ‘ सार्बजनीक … (भिडियो सहित)
हरर जनराको चलचित्र “सुनकेसरी” निर्माण गरिदै …